SomaliTalk.com » Muna
Home » Qoraallada Halkudhegga "Muna"
Miyuusan idinku jirin mid fiicani?! ‘Suuratu Huud 78’
Dhiilada colaadeed iyo dhiiga qubanaya ee aan kala go’a lahayni waxa uu astaan u yahay garawshiyo la’aanta haysata in badan oo ka mid ah bulshada soomaliyeed. Su’aalaha soo noqnoqda ee aan jawaabta u baahnayn hadana ay adagtahay in la fahmo waxa ka mid ah maxa la isku haystaa? Maxaa waxan oo dhiig ah loo daadinaya?! Fahamka mushkilad ku haysataa waxa ay qayb ka tahay raadinta xalkeeda. Laakiin...
Calaamadaha Uurka Bilowga ah | MUNA YASSIN
Waxaa jira dhowr calaamadood oo lagu garto inay haweeneydu uur qaadday, ha yeeshee calaamadahaasi middoodna keligeed kuma filna inay tusaale cad u noqoto jiritaanka uurka, balse waa in la helaa iyaga oo isku duuban si loo hubiyo in uur jiro. 1- Caadada oo istaagta:- Calaamooyinka lagu garto uurka bilawga ah tan ugu caansan, uguna saxsani waxa weeye caadada oo joogsata. Ha yeeshee, haddii ay dhacday...
Halkudheg: hooyo, Muna
Daba Qabashada Qaranka Soomaaliyeed, Waxaa Ka Horeeya In La Qabto Damiir Laawaha Hunguriga Xun By Muna Abshir Abdi Osman, Biomedical scienstist Sunday 19 July 2010 Mahad oo dhan ilaahay ayey u sugnaatay, nabad galyo iyo naxariisna ha ahaato nabigeena suuban dushiisa (CSW). Qormadan hadii alle idmo waxaan ku lafa guri doonnaa qaybo ka mid ah dhibaatada haysata umadda Soomaaliyeed ee burburisey dalkoodii...